Accueil > Gazetin'ny nosy > Depioten’i Soalala : Manaratsy endrika ny Filoha Rajoelina
Depioten’i Soalala : Manaratsy endrika ny Filoha Rajoelina
Solombava voafidy tao amin’ny distrikan’i Soalala any Melaky i Saïd Zakaniaina. Miseho azy ho tompom-pahefana any an-toerana izy, ary mirehareha ho zanaka an-tranon’ny filoha Rajoelina, ka manampatra fahefana aoka izany ary miseho azy ho to-teny na aiza na aiza. Namoaka vava mihitsy àry izy taorian’ny nahalany azy ho solombava fa hoesorina amin’ny toerany avokoa ireo mpiasampanjakana ambony ao an-toerana rehetra, toy ny “médecin inspecteur”, ny tonian’ny distrika, ny lehiben’ny Zandary (Cb), ny tonian’ny fari-piadidiam-pampianarana (Chef Cisco)… ary nireharehany aoka izany fa izy ihany no tompon-teny farany amin’ny fanendrena sy fametrahana ny solon’izy ireo.
Dia noesorina tokoa ireo voatanisa ireo sy ny hafa, saingy hatreto dia ny lehiben’ny zandary (CB) no voasolo. Etsy ankilany, talohan’ny naha-solombava azy dia nifanaraka tany ambadika tany izy, ka zary bokan-trosa, hoy ny fitenenana.
Dia nihetsiketsika indray Ingahy solombava ka ilay olona nanan-trosa taminy no narotsany ho kandidan’ny vondron-kery “IRK” nofidiana ben’ny tanàna. Tsy lany ity kandidan’Ingahy solombava ity fa any amin’ny laharana fahatelo no nisy azy.
Dia namoaka vava indray izy fa tsy maintsy hataony izay haha-ben’ny tanàna ny olona akaiky azy. Ny nahazo ny laharana faharoa tamin’ireo mpifaninana ben’ny tanàna moa dia azoazon’Ingahy solombava kokoa noho ilay voalohany lanim-bahoaka.
Re àry fa nisy fanoloram-bola 50 tapitrisa ho an’ny tompon’andraikitry ny fifidianana tany an-toerana, ka nivadika ny voka-pifidianana. Ny vokatra tao amin’ny fokontany Amborika no navadika tamin’ny alalan’io vola 50 tapitrisa io, ka lasa ilay laharana faharoa no hoe nahazo ny isam-bato be indrindra. Vato 6 no azon’izy io tao amin’io fokontany io dia notsinginina tarehi-marika teo anoloany ka nambara fa nahazo vato 306. Ny tsy tsinjon’ireo mpanao hosoka dia 180 no isan’ny mpifidy tonga nandatsa-bato. Dia tsy nanaiky an’izany tranga izany ny Fokonolona ka manao fihetsiketsehana any an-toerana amin’izao fotoana. Nirotsaka an-tsehatra nanao fanadihadiana ny tompon’andraikitra mba hamantarana ny tena tompon’antoka tamin’io famadiham-bokatra io. Anio alatsinainy no tokony ho hita fototra izany. Ny re dia lasa nitsoaka nandositra any Mahajanga Ingahy solombava Saïd Zakaniaina, ary ny trosan’olona taminy koa, nolaviny, tsy nekeny ny hanonitra azy intsony, satria tsy lany fa tany amin’ny laharana fahatelo ilay tompon-trosa. Raha tsiahivina dia nananika ny 300 Tapitrisa ny volan’olona notrosain’ingahy solombava talohan’ny nirotsahany nofidiana solombava, ary efa namoahan’ny manam-pahefana didy fikarohana (avis de recherché) izy momba izany, saingy lany solombava moa izy taty aoriana, ka zary madio tampoka. Ny fireharehany ho zanaka an-tranon’ny filohampirenena aloha dia manaratsy endrika ny filoha, ka tokony hampanao fanadihadiana ny filoha ny amin’izany. Mainka koa fa misy izao resaka fanampara-mpahefana sy fivadiham-pitokisana amin’ny volan’olona notrosaina izao.